Ikhaya / Blog / Awazi ukuba uyikhetha njani ibhafu? Ezi modeli zingama-31 zikunika ukuphefumlelwa
2021 / 04 / 10 uhleloBlog 3395 0
Xa udiniwe, ibhafu ibonakala ikuhlaziya, ke ukuba nebhafu efanelekileyo lelinyathelo lokuqala elibalulekileyo. Ibhafu eyenzelwe kakuhle ayiphumzi umzimba kuphela, kodwa ikwanokubetha umlinganiswa ophambili kwigumbi.
Isiseko esincinci sikhaphukhaphu kwaye sihle, kwaye ityhubhu encinci iyasusa nakuphi na ukuhonjiswa okugqithileyo, isenza yonke intle ngakumbi ▼
Umda omncinci osikiweyo unika amava ahlukileyo ngokupheleleyo.
Ulungelelwaniso olugqibeleleyo lwenkwenkwezi enamachaphaza enkwenkwezi enza imeko yothando.
Ukugqitywa okumnyama, okumanzi okumnyama kuyonwabisa emehlweni kwaye kubekwe ngokukodwa kwiithayile ezinqunyanyisiweyo.
Eyilwe nguPatricia Urquiola, ibhafu ye-Cuna ifaka i-tubular yoyilo lwesakhelo sobhedu esiyi-retro kwaye sihle.
Ukutyekela okwahlukileyo kwezi ziphelo zibini kuzisa ubuhle obwahlukileyo.
Kukho neebhafu zokuhluma eziqhakaza ngathi ziipalati, njengomsebenzi wobugcisa.
Ekuboneni kokuqala kujongeka ngathi ziityhubhu ezibini ezixineneyo ezihlanganisiweyo, kodwa eneneni zenziwe ngesiqwenga esenziwe ngononophelo semabhile ye beige.
Umphetho oshushu kwicala elinye wenza kube lula ukubeka izinto ezincinci ▼
Ibhafu emile okwe skwere inemigca ebukhali, iyenza ilungele ngakumbi ikhaya elincinci.
Ngaphandle lwayo olubukhali kunye namagophe athambileyo ngaphakathi, ukuphazamiseka okumangalisayo kweemilo zejiyometri kuzisa umtsalane ongalibalekiyo.
Ukumila kwale bhafu kunokuxhasa umzimba omileyo kwaye kufanelekile kwabo bangakuthandiyo ukulala ebhafini.
Umnyama nomhlophe zingqubana ngendlela emangalisayo, kwaye iqonga leemabhile elingaphantsi likhusela umgangatho wamaplanga emanzini.
Wonke umnyama, le bhafu ibha-oksion ifikelela ngaphezulu, njengesikhephe esimnyama.
Iziko elihlaziyiweyo lenziwe isitayile kwaye kulula ukungena kulo.
Imigca emhlophe egudileyo ijikeleze emazantsi esiphelo samalahle, evakalisa amanzi aqukuqelayo.
Imiphetho ethambeke kancinci inika ibhafu indawo yokudlala, ukujonga komntu ngelixa inika inkxaso eyongezelelweyo yomva.
Ukujonga ubungakanani beentlanzi kuyinto entle ▼
Le bhafu ivela kwingqokelela yeAxor kaJean-Marie Massaud. Ubume obujikeleziweyo, obunxantathu bukhangeleka buhle kakhulu kwaye budala ukuzola kwendalo.
Ibhafu yokuhlambela eyakhelwe-ngaphakathi iyangqinelana nendawo ekungqongileyo
I-limestone ine-marbling efudumeleyo e-rustic kwaye ishushu ▼
Ibhafu ye-ovoid iyimodeli eguqukayo kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela encinci, ke ngekhe uhambe ngokungakhathali nokuba uyibeka phi.
Ngaphambili :: 2021 Igumbi lokuhlambela elineNdonga yangasese eHung-Ungayihombisa njani iValiant and Beautiful? next: "Ixabiso eliphezulu" legumbi lokuhlambela, liyamangalisa, ngaba kukho uhlobo olulungileyo engqondweni yakho?
2021 / 04 / 12 4033